Bar & Grill – Warmae.com
, article, Bar & Grill, Rooftop Bar, Warmae Review
ဒီလိုအချိန်က Rooftop တွေကိုသွားရမယ့် ရာသီဥတုနဲ့ အချိန်အခါမျိုးပါ။ ဖွင့်ထားတာသိပ်မကြာသေးတဲ့ Rooftop Bar တစ်ခုအကြောင်းကို ဒီတစ်ပတ်မျှဝေပေးပါမယ်။ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်က Esperado Business Tower မှာရှိတဲ့ Barcelona Bar & Restaurant ပါ။
ဆိုင်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းမယ့် အပြင်အဆင်လေးတွေနဲ့ Night View ကောင်းကောင်းလေးတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံအတူရိုက်ဖို့အတွက်လည်း Decoration လှလှလေးနဲ့ Cocktail အစုံလည်းရနိုင်ပါတယ်။ ကြာသပပေး၊ သောကြာ၊ စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေတိုင်းမှာ Unplugged Music အစီစဉ်တွေနဲ့အတူ ဘော်ဒါတွေနဲ့ အဖွဲ့လိုက် ပျော်ပါးဖို့အတွက် စီစဉ်ပေးထားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အစားအသောက်အနေနဲ့ကတော့ ငါးအရေခွံအကြွပ်ကြော်၊ ကြက်အူအကကြွပ်ကြော်၊ ဝက်နံရိုးကြော်စတဲ့ ဘီယာနဲ့မြည်းလို့ကောင်းမယ့်အကြော်အစုံအလင်လည်းရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆိုင်အပြင်အဆင်နဲ့ ပုံစံလေးက သဘောကျစရာကောင်းပြီး Rooftop ကိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေသွားကြည့်ရမယ့် ဆိုင်အသစ်လေးတစ်ဆိုင်ပါ။
ဘော်ဒါတွေနဲ့ စုသွားလို့ရမယ့် ရှုခင်းကြည့်ပြီး အေးဆေးစားသောက်နိုင်မယ့် ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်အကြောင်းကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Photos: Barcelona Bar & Restaurant
7th Floor, Tower 2, Esperado Business Tower, No (20/22), Joe Phyu Street, Yangon.
Phone : 09 899 989233
SAT-SUN 11:00AM – 1:00AM
, article, Bar & Grill, Warmae Review
ပိတ်ရက်မှာ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ဘီယာလေးသောက် အမြည်းလေးစားပြီးနေချင်တဲ့သူတွေအတွက် နေရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ သီချင်းလေးနားထောင်ပြီးသောက်ရတာကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ ကျွန်းတောလမ်းကဦးနှုတ်ခမ်းမွှေးဘားပါ။
photo - Mustache Bar
ဆိုင်အပြင်အဆင်ပုံစံဆန်းဆန်းနဲ့ သောက်စရာအမြည်း Cocktail အစုံရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ အပြင်းကိုမှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် Vodka, Whisky, Gin အမျိုးအစားအစုံအပြင်ပျော့ပျော့ကိုပဲရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဦးနှုတ်ခမ်းမွှေးရဲ့ Signature Cocktails တွေလည်းရပါတယ်။ ဆိုင်ပုံစံကအထာကျကျနဲ့ ဘီးကျဲကြီးတွေရဲ့ ပုံစံအငွေ့အသက်တွေနဲ့ပါ။
ဆိုင်ရဲ့တည်နေရာက ရုံးတွေနဲ့မနီးမဝေးမှာရှိပြီးတော့ သွားရလာရလည်း အရမ်းရှုပ်တဲ့နေရာမဟုတ်တာကြောင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သွားဖို့အဆင်ပြေမယ့်နေရာလေးလို့ မြင်မိပါတယ်။
Corner of Kyun Taw Street & Narnat,Near Han Thar Waddy Yun Long Golf Club,Kamayut.
Phone : 09 893 999 309
MON-FRI 15:00 – 1:00
SAT-SUN 15:00 – 1:00
အစားအသောက်ကောင်းတွေစုံတဲ့ တောင်ဥက္ကလာက ဘား
ဒီတစ်ခေါက် တောင်ဥက္ကလာဘက်ကို ခြေဆန့်ရင်း မထင်မှတ်ပဲလမ်းကြုံဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖွင့်ထားတာ သိပ်မကြာသေးတဲ့ ဘားတစ်ခုအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ Conifer 46 လို့ခေါ်တဲ့ တောင်ဥက္ကလာပ၊ ဗြဟ္မစိုရ်လမ်းက ဆိုင်လေးပါ။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုသွားဖြစ်တာကြောင့် စားဖြစ်ခဲ့တဲ့အမြည်းဟင်းပွဲကတော့ အတော်လေးစုံလင်တယ်။ ဆိုင်ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံးနဲ့ လူစားအများဆုံးလို့ဆိုတဲ့ အဏ္ဏဝါမီးတောက်ဆိုတဲ့ဟင်းပွဲအကြောင်း အရင်ဆုံးစပြောချင်တယ်။ ကကတစ်ငါး၊ ပန်းဂဏန်း၊ ပုစွန်တို့ကို ပင်စိမ်း၊ ပန်းပွင့်တို့နဲ့ရောချက်ထားတဲ့ဟင်းပွဲဖြစ်ပြီး ငါးကြိုက်တဲ့သူတွေရွေးသင့်တဲ့ ဟင်းပွဲလို့ပြောချင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အသားများပြီး စားရတာမွှေးမွှေးလေးနဲ့ အီဆိမ့်နေတဲ့ဝက်ဂုတ်သားကင်ပါ။ ခါတိုင်းစားနေကြပုံစံတွေလိုမဟုတ်ပဲ ပျားရည်၊ ခရုဆီတို့နဲ့ ထိုင်းစတိုင်လုပ်ထားတာကြောင့် အစပ်မစားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက် အတော်လေးအဆင်ပြေတယ်။
နောက်ထပ် ရှူးရှူးရှဲရှဲကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အမဲကချင်ထောင်းက လည်းစားလို့ကောင်းပြီး ချဉ်၊ စပ်အရသာအပြည့်ပေးနိုင်တဲ့ အမြည်းတစ်ခုပါ။ အချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင် အမြည်းအရသာတော်တော်များများက local တွေအတွက် ပါးစပ်မစိမ်းတဲ့အရသာရှိတဲ့ အမြည်းတော်တော်များများရနိုင်ပါတယ်။
သောက်ခဲ့တဲ့ Cocktail တွေအကြောင်းလည်း ဖောက်သည်ချချင်ပါသေးတယ်။ အရသာခပ်ပျော့ပျော့နဲ့ မိန်းကလေးတွေအဆင်ပြေမယ့် Cocktails တွေကတော့ Rosey (Tequila base)၊ Green Lady (Vodka base)၊ Blueberry Margrita (Tequila base) နဲ့ Berry Collin (Gim base) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခပ်ပြင်းပြင်းချမယ်ဆိုရင်တော့ Blue Arrow Cocktail ကိုရွေးသင့်တယ်လို့ အကြံပြုပါတယ်။ Draught Beer ကတော့ Carlsberg ၊ Myanmar Premium နဲ့ Heineken တို့ရှိလို့ သောက်ဖို့အတွက်လည်း ရွေးချယ်စရာ အတော်လေးစုံလင်ပါတယ်။
ဆိုင်က အပေါ်ထပ်အောက်ထပ် ၂ နေရာရှိပြီး အပေါ်မှာက လူပိူရှင်းပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့အစားအသောက်ကောင်းတယ်၊ ရွေးချယ်စရာစုံလင်တယ် သွားဖို့သင့်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုလို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်။
No-676,4/6 Bya Ma Soe Street , Southokkalapa Tsp , Yangon.
Phone : 09 44790 7940
99 Bistro Roof Top Bar & Restaurant
, Bar & Grill, Warmae Review
လူရှင်းပြီး အေးဆေးထိုင်လို့ရတဲ့ Roof Top Bar
လူရှင်းပြီး အေးဆေးထိုင်လို့ရတဲ့ Roof Top Bar တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာကတော့ အလုံမြို့နယ်၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းနဲ့ သစ်တောလမ်းထောင့်က Hotel 99 Yangon အပေါ်ဆုံးထပ်မှာရှိတဲ့ 99 Bistro Roof Top Bar & Restaurant ပဲဖြစ်ပါတယ်။
99 Bistro Cocktails
အစားအသောက်အနေနဲ့လည်း အမျိုးအစားတော်တော်စုံလင်စွာရနိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်သွားစားဖြစ်ခဲ့တဲ့ 99 Bistro ရဲ့ဝက်လက်စတူး၊ ပုစွန်ငရုတ်ကောင်းမြေအိုးနဲ့ သတ်သတ်လွတ် ဂျပန်တိုဟူးအကြောင်း ပြန်ပြီးဖောက်သည်ချချင်ပါတယ်။
ပုစွန်ငရုတ်ကောင်းမြေအိုး – ပုစွန်ထုပ်အကောင်းကြီးကြီးတွေ ဝန်းရံထားတဲ့ ဒီဟင်းပွဲက ဒီ Bar ရဲ့ Signature တစ်ခုလို့လည်းဆိုပါတယ်။ ပုစွန်၊ ပန်းငရုတ်ပွ၊ ငရုတ်ကောင်းစေ့၊ ကြက်သွန်မြိတ်တို့ပါပြီး ငရုတ်ကောင်းအာနိသင်ကြောင့် ပူတဲ့အရသာရှိပါတယ်။ ပုစွန်တစ်ကောင်ချင်းစီကို သေချာနှယ်ပြီး ချက်ထားတာကြောင့် အသားမှာပါ အရသာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဝက်လက်စတူး – ဝက်လက်ရဲ့အသားတွေချည်း နူးအိနေအောင်ပေါင်းထားတဲ့ ဝက်လက်စတူးက စားလိုက်တာနဲ့တင် အီဆိမ့်သွားစေပါတယ်။ မှုန်ညှင်းရွက်၊ မှို၊ ဘဲဥပြုတ်တို့ပါဝင်ပြီး ဆီအရမ်းမများပဲ စားရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ အရသာက အချိုဘက်ကိုအနည်းငယ်သွားပြီး ကလေးတွေပါကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဂျပန်တိုဟူး – သတ်သတ်လွတ်စားတဲ့သူတွေအတွက် ဟင်းပွဲပါ။ ဂျပန်တိုဟူးကို ကြွက်နားရွက်မှို၊ ကောက်ရိုးမှို၊ black mushroom တို့နဲ့တွဲချက်ထားပြီး ပဲငံပြာရည်အရသာနဲ့ အချိုဘက်သွားတဲ့အရသာရှိပါတယ်။ ဟင်းကို ထောပတ်နဲ့ ကြက်ဥခင်းထားတဲ့ hot plate ပေါ်မှာပြင်ဆင်ထားတာကြောင့် ကြက်ဥနဲ့ သက်သက်လွတ်အကြောင်းကို စဉ်းစားရင်း စားခဲ့ရတဲ့ဟင်းပွဲလေးတစ်ခုပါ။
ဒီ Roof Top Bar က လူအရမ်းမများပဲ အေးအေးဆေးဆေးသွားချင်တဲ့သူတွေအတွက် လုံးဝသင့်တော်ပါတယ်။ ဘားမှာဘာတွေရနိုင်လဲဆိုတော့ Classic and Modern mixology Beverages အစုံရနိုင်ပြီး beer, wine တွေအပြင် Classic, Creation, Signature Cocktail, 99 Bistro Brewed Coffee ကို သောက်လို့ရပါတယ်။
Thit Taw Street,
Phone : 01 230 2512